YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, April 17
ပွင့်လင်းလွတ်လပ်စွာ ခြေရာခံစစ်ဆေးနိုင်မှုကင်းမဲ့ခြင်းကြောင့် အဂတိချစားမှုက ဆင်းရဲချမ်းသာမှုအား အံ့မခန်းဘွယ် ကွာဟကြီးထွားလာရခြင်းနှင့် အကန့်သတ် သီးခြားသတ်မှတ်ထားသည့် အနည်းငယ်သောလူတန်းစားများအတွက်သာ ကြီးမားသော ငွေရေးကြေးရေးပိုင်ဆိုင် စီမံပိုင်ခွင့်အားမျက်နှာသာပေးခွင့်ပြုထားလေ၏။ ထိုအချက်၂ချက်ကြောင့် ဆင်းရဲချွတ်ခြုံကျမှုပမာဏ တိုးမြင့်လာပြီး ပြည်သူလူထုအတွက် အကျိုးသက်ရောက်စွာ အသုံးပြုခွင့်ရှိသော ဓနအင်အား ချိနဲ့ ချို့ယွင်းသွားရသည်ဟု The Financial Time က ရေးသားထောက်ပြပါသည်။
မြန်မာပြည်အတွင်း နိုင်ငံခြားမှ ၀င်လာသောငွေ၏ အကြီးမားဆုံးသည် တန်ဘိုးဂနကြီးသောကျောက်မျက်၇တနာလုပ်ငန်းနှင့် သဘာဝတွင်းထွက် ဂစ် များအား စုပ်ထုတ်ရောင်းချခြင်းဟု သိရသည်။ ယခင် ဦးသန်းရွှေ စစ်အုပ်စုနှင့် ယခု ဦးသိန်းစိန်တို့၏ အုပ်စုနှစ်ခုလုံးက တိုင်းပြည်၏ ၀င်ငွေပမာနအား ပွင့်လင်းမြင်သာစွားဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခွင့်မပြုကြောင်းကို ယခုတိုင်ပင်ရှိနေလေသည်။ တိုင်းပြည်၏ ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ၀င်ငွေပမာဏအား ယနေ့ထိ ဘယ်လို ရရှိသည်၊ မည်သို့ စီမံသုံးစွဲသည် ဆိုသော အချင်းရာအား ဖွင့်ထုတ်ဖေါ်ပြခြင်းမရှိသည့်အပြင် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာမှ ပါဝင်ပတ်သက်သော ရင်းနှီးမြုပ်နှံလုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအား အဆိုပါဝင်များတွင် စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိနေသောကြောင့် မည်သို့မည်ပုံ ရရှိသုံးစွဲနေသည်မှာ ခန့်မှန်းတွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိသေးသော အနေထားတွင်ရှိနေရခြင်းနှင့် အကျိုးမြတ်ခွဲဝေရယူမှုအနေထား ဖုံးကွယ်ထားခြင်းသည်ကပင် အလွန်ရှည်လျှားသော မြန်မာပြည်၏ သံယံဇာတမှာ ကြောက်မက်ဖွယ်ကြိမ်စာသင့်နေကြောင်း Asia Review စာစောင်က ရေးသား ထောက်ပြပါသည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်မှစ၍ သဘာဝဓါတ်ငွေ့တင်ပို့မှုမှ ရရှိသော ကနဦးလက်ခံရရှိသော ၀င်ငွေမှ ယနေ့တိုင်ပင် မည်သို့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ခန့်ခွဲကြောင်း အတိလင်း ဖေါ်ပြခြင်း မရှိသည်မှာ ဦးသန်းရွှေ စစ်အုပ်စုအုပ်ချုပ်မှုကာလနှင့် လက်ရှိ ဦးသိန်းစိန် အုပ်စု အုပ်ချုပ်နေသော ကာလ နှစ်ရပ်လုံးတွင် တွေ့ရသည်။ သဘာဝဓါတ်ငွေ့များ ရောင်းချလိုက်ခြင်းမှရသော နိုင်ငံတော်ပိုင်ငွေများသည် ပြည်သူအတွက် သုံးစွဲရန် ဘတ်ဂျက်ငွေအဖြစ် အဘယ်ကြောင့်ရောက်လာခြင်းမရှိသေးသလဲ?ဟု မေးခွန်းထုတ်၇ပေမည်။ သို့သော် ကျွမ်းကျင်သော ပညာရှင်အများစု၏ ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအရ အဆိုပါ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေများသည် တိုင်းပြည်သို့ ၀င်မလာပဲ နိုင်ငံခြားတွင်ရှိသော ငွေအပ်နှံမှု (ဘန့်ခ်) အကောင့်များတွင်သာ အပ်နှံထားပြီး စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရာရှိကြီးများအတွက် နှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ စစ်လက်နက်များ ၀ယ်ယူရန်အတွက်သာ ထည့်သွင်းထားသည်ဟု ( The Global Economic) စာစောင်က ထောက်ပြထားသည်။
နိုင်ငံတော်မှပိုင်ဆိုင်သော မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာတွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့သော အရာရှိကြီးတဦး၏အဆိုအရ ဆိုလျှင်၊ ရတနာ သဘာဝဓါတ်ငွေ့မှ ရောင်းချရရှိသော ငွေများအား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခြင်းလုံးဝမရှိကြောင်း ဖွင့်ဟဘူးသည်။ အဆိုပါ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောင်းရငွေများအား တတိယ ကြားခံအဖွဲ့စည်းမှ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များဖြစ်သော တရုတ်၊ ဒူဘိုင်းနှင့် စကာင်္ပူတို့တွင်ရှိသော ငွေအပ်နှံရာ ဘဏ်များသို့ ပေးချေ ရောက်ရှိနေသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် မြန်မာပြည်မှာ အမေ၇ိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၂ထောင်မှ သန်းပေါင်း ၄ထောင် ထိပင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောင်းချရသော ၀င်ငွေများ ရရှိခဲ့ရပြီး ၄င်းငွေသားများအား မြန်မာပြည်သူများနှင့်ဆိုင်သော တိုင်းပြည်၏ ဘဏ်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာရန်မှ (The Economic Star Magazine) စောင်က အောက်ပါအတိုင်း ထောက်ပြထားသည်။
အဆိုပါ ထောက်ပြသောအကြောင်းရာများထဲတွင် ထိမိဆုံးသော စကားလုံးမှာ” မြန်မာပြည် စစ်အာဏာရှင် အစိုးရမှ လူ့အခွင့်ရေးများအား မိမိ၏ တိုင်းသူပြည်သားများအပေါ် ချိုးဖေါက်ယုံတင်မက သန်းထောင်ပေါင်းများစွာသော အမေ၇ိကန် ဒေါ်လာများအား လုံးလုံးလျားလျား ပြည်သူများမှ ဓားမြတိုက် လုယက် ကွယ်ဝှက်ထားသည်” ဟု ဆိုထားသည်။
သဘာဝဓါတ်ငွေ့နှင့် ကျောက်မြက်ရတနာတို့မှရ၇ှိသော ၀င်ငွေအား တရားဝင် ငွေလဲလှယ်နုံန်းအဖြင့် အမေ၇ိ ၁ကန်ဒေါ်လာသည် မြန်မာငွေ ၈၀၀မှ ၁၀၀၀ ကျပ် ၀န်းကျင်ပေါက်သော အချိန်ဝယ် မြန်မာငွေ ၆ ကျပ်နုံန်းနှင့်သာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကာလအတွင်း စစ်အုပ်ချုပ်မှုတွင် သတ်မှတ်ခဲ့သည့်အတွက် သဘဘ၀ဓါတ်ငွေ့ရောင်းချမှုမှရရှိသော သန်းထောင်ပေါင်းများစွာဖြစ်သည့် အမေရိကန်ဒေါ်လာများအား
စားရင်းအင်းမရှိ အရှင်းပြောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာ ထိပ်ပိုင်း စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများက ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှစကာ အဆိုပါ တရားဝင်ငွေလဲနုံန်း သတ်မှတ်ထားချက်အရ နိုင်ငံခြားသို့တင်ပို့သော သဘာဝဓါတ်ငွေ့ရောင်းချမှုတန်ဘိုး၏ ဒေါ်လာ ဘီလီယံများစွာအား ဆထက်တံပိုး ကွယ်ဝှက်ကာ အိပ်ထဲသို့ ထည့်ခဲ့ကြသည် ဟု လက်ရှိ အမေ၇ိကန် ငွေထိန်းချုပ်ရေဌာနက ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ဘူးသည်။
အဆိုပါ ငွေလဲလှယ်နုံန်းစည်းမျဉ်းအရ မြန်မာအာဏာပိုင် အုပ်စုအဖို့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ထိတိုင် ရတနာ သဘာဝဓါတ်ငွေ့မှ ထုတ်လုပ်တင်ပို ရောင်းချသောဝင်ငွေမျာအား အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေ သန်းပေါင်း ၄ထောင်နီးပါးမှ သန်းပေါင်း ၅ ထောင် နီးပါအထိ နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေ ၉၉ ရာနုံန်းအား ခိုးဝှက် ခဲ့ကြသည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြသည်။ ရတနာ သဘာဝဓါတ်ငွေ့တခုတည်းမှပင် တင်ပို့သော နိုင်ငံတော်ပိုင် တန်ဘိုးဝင်ငွေ ပမာဏ ဘာဂျက်တခုတည်းပင်သည် မြန်မာပြည်အတွင်း ခလေးသူငယ် သန်း၃၀ အတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာ စာသင်ကျောင်းပေါင်း ၂ သောင်း ကျော်မက တည်ဆောက်ဖွင့်လှစ်ထူထောင်ပေးလို့ရသည်ဟု Burma’s Resource Curse ဟုခေါ်သော “မြန်မာ့ သံယံဇာတ ကြိမ်စာသင့်နေခြင်း” ဆိုသော စာတမ်းတွင် အတိကျ ထောက်ပြထားပါသည် ခင်ဗျာ။
မှတ်ချက်။ ။ ဒုတိယပိုင်းတွင် သူခိုးတို့ လိမ်လည်မှု မည်မျှပင်ပိရိကြောင်း သက်သေအထောက်ထားများဖြင့်တင်ပြပေးပါမည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/17/20130အကြံပြုခြင်း
နေပြည်တော် ကြောက်နေသော ဂါထာ (၅)ပုဒ်
(၁)(မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် (အီတီ) ဟုခေါ်သော ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ဦးဆောင်အဖွဲ့စည်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား?
နိုင်ငံတော် သမ္မတမှ သူ့အနေဖြင့် (အီတီ) ဟုခေါ်သော ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ဦးဆောင်အဖွဲ့စည်းချုပ်နှင့် ပူးပေါင်းရန် ပြောခဲ့ဘူး၏။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှလည်း Myanma Oil and Gas Enterprise မြန်မာ့ ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်ရောင်းချရေး လုပ်ငန်းများ အနေဖြင့် ၄င်းတို့၏ ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုများအား သိသာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် တင်ပြတောင်းဆိုဘူးခဲ့ဘူးသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ဖေါ်ပြပါ (EITI-အီတီ) နှင့်ပတ်သက်သော ကောင်းမွန်ပွင့်လင်းမြင်သာသည့် နိုင်ငံတကာက အသိမှတ်ပြုသော စီးပွါးရေး ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်မှု ဆိုသော စာချုပ်အား ချုပ်ဆိုရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးလား? ဟု မေးခွန်းအကြီးအကျယ်ထုတ်သင့်သည်။
Is Myanmar ready for EITI?
The president has said he wants Myanmar to join the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).
Aung San Suu Kyi has called on MOGE (Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) isanational oil and gas company of Burma. to shed light on its books. Is Myanmar government ready to join the global 'good governance' movement and sign up for EITI?
(2) မြန်မာပြည်တွင် အမှန်တကယ်လိုအပ်သော လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အား ဘယ်ပုံဘယ်နည်းဖြင့် ဆောင်ရွက် ထုတ်ယူ မည်နည်း?
မြန်မာပြည်လူဦးရေ သန်း ၆၀ ရှိသည့်အနက် ၁၃ သန်းသာလျှင် ၂၀၁၃ ယခုနှစ်ထိ လျှပ်စစ်မီးအား ခံစား သုံးစွဲခွင့် ရရှိနေရဆဲသာဖြစ်သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစကာ အစိုးရအနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် တရုတ်ပြည်သို့ သဘာဝဓါတ်ငွေ တင်ပို့ရောင်းချမှုသည် သန်းပေါင်း ၈ ထောင် ကျူးဘစ် မီတာ ရှိကြောင်း နိုင်ငံတကာ စစ်တမ်းကဆိုထားသည်။ ယခင် ရှေ့အစဉ်လာများအရ စွမ်းအင်နှင့်ပတ်သက်သော ဆက်စပ်သည့်လုပ်ငန်းများအား အမှောင်ပိတ်လျှိ့ ဝှက်လုပ်ဆောင်မှုများ ရှိနေခဲ့သည်။ ထိုစွမ်းအင်လုပ်ငန်းများဖြစ်သော သဘာဝဓါတ်ငွေ့နှင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်လုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်စပ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများအား ပိုမိုသိသာစွာ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်လော? ပြည်တွင်း လိုအပ်မှုများ သုံးစွဲမှုဝယ်လိုအား မြင့်မားလာအောင် ဆောင်ရွက်လေမည်လော?
What if the population wants more electricity?
Only 13million of Myanmar's 60 million people had access to electricity in2013 – and yet, as of 2009, the government exported over eight billion cubic meters of natural gas annually to places like Thailand and China in accordance with international recorded view.
The energy sector operated in relative secrecy in previous decades. Will its opening up to foreign investment acquaint more Burmese with the idea that, in fact, there is gas and electricity to be had? Will domestic demand begin to rise?
(၃) မူးယစ်ဆေးဝါးမှရရှိသော ဒေါ်လာငွေမဲများအား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအသစ်ဖြင့် လျော်ဖွတ်နိုင်မည်လား?
မူးယစ်ဆေးဝါးကုန်သွယ်မှုဖြစ်သော၊ ဘိန်းဖြူနှင့် မူးယစ်ဆေးပြားများထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း ဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသောအားဖြင့် -ဗဟိုအစိုးရ၏ထိန်းချုပ်မှုအားနည်းသောဝေးလံခေါင်သီသည့်တိုင်းရင်းသားများ၏ဒေသနယ်မြေများ တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးများထုတ်လုပ်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လျက်ရှိနေသည်။ ထိုအခြင်းအရာကြောင့် ထိုဒေသများတွင် အစိုးရမှ မိမိတို့ ဖုံးဝှက်ရန်ထိန်ချန်ထားသည့် မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုမှ ရရှိသောငွေမဲများအား စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပုံစံပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မှုနှင့် လွတ်လပ်သော ရင်းနှီးမြုပ်နှံအထောက်ပံ့အား မိမိအကျိုးမမျှော်လင့်ပဲ ပေးနိုင်သလား?
Could narco-dollars be recycled inanews investment wave?
The drug trade – heroin and methamphetamine, in particular – has thrived for decades in remote, ethnic minority areas where the central government has little
control. Could the government to do liberalized investment policies, and the diversified economy that may help produce in the concerning regions without expect for self-interest, from drug money more places to hide?
(၄) မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ဒုတိယစီမံကိန်းလို့ဆိုတဲ (B) PLAN ရှိသလား?
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လူတဦးခြင်း၏ နှစ်ချုပ်ဝင်ငွေသည် သုံးဆ တိုးတက်လာမည်ဆိုသော ဒေါ်လာ ၃၆၀၀ ခန့် ရရှိနိုင်ကြမည်ဖြစ်သည့် မက်လုံးပန်းတိုင်ကြီးသို့ရောက်ရှိမည်ဟု တထစ်ချ ကြေငြာပြောဆိုခဲ့ပြီးပြီ။ ၄င်းဆိုခဲ့သော မှတ်ချက်သည် ကုန်ထုတ်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အသီးသီးတွင် ကျယ်ပြန့်လာမည်ဖြစ်ပြီး တိုးတက်မှုအရှိန်ဟုန်မြင့်လာနိုင်မည်ကို ပြောဆိုသော်ငြားလည်း သဘာဝဓါတ်ငွေ့နှင့် တွင်းထွက် သံယံဇာတတို့မှ ရရှိသော တိုးတက်မှုမျိုးမဟုတ်ပဲ အခြားသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများမှရရှိလာနိုင်သော တိုးတက်မှုများဖြစ်လာနိုင်ခဲ့ပါသနည်းဟု မေးခွန်းထုတ်ကြရမည်။
Is thereaplan B by Myanmar government
President Thein Sein has set the lofty goal of tripling national per capita GDP to $3,600 by 2016. The opportunity to expand Myanmar's industrial and service
sectors could come through the development of its extractive industries; but what other forms of economic improvement could oil, gas and mining development help bring about?
(၅) ဓါတု အဆိပ်တောက်ဖြစ်စေသော သံယံဇာတတူဖေါ်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ ထိခိုက်မှု ရလဒ်အား မည်သို့သော မူဝါဒများပြုပြင်ကာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်နည်း?
ဓါတု အဆိပ်တောက်ဖြစ်စေသော သံယံဇာတတူဖေါ်ရေးလုပ်ငန်းများဆိုသော လုပ်ငန်းများအား၂၀၀၄ ခုနှစ်ထိတိုင် မြန်မာ့ သတ္တုတွင်း ဌာနမှ ၁၃၂၀ လုပ်ငန်းမိုင်းတွင်းများအား ခွင့်ပြုထားသည်ဟု တရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်။
အကယ်၍ စီးပွါးရေးဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု မူဝါဒသည် အမှန်တကယ်ပင် ညီမျှလွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးမည်ဆိုပါလျှင် လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသော ဓါတုအဆိပ်တောက်ဖြစ်စေသော သံယံဇာတတူးဖေါ်ရေးလုပ်ငန်းများအပေါ်မည်သို့ အကျိုးသက်ရောက်လာမည်နည်း? ကို မေးခွန်းထုတ် ဂါထာအား ရေရွတ်တင်ပြပါသည်။
ဦးသိန်းစိန် အနေဖြင့် သရုပ်မှန် ပကတိ အဖြေများအား ဖြေကြားပေးစေလိုပါသည်။
How could investment policy reform impact arsenic mining?
Arsenic mining in Myanmar is widespread – in 2004, the Ministry of Mines reported 1,320 arsenic mining permits. If investment policies are liberalized, how
might the arsenic mining sector be affected?
မှတ်ချက် ။ ။ ယခင် အစိုးရ ခိုးခဲ့သော အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ထောင်ပေါင် ၉၆ နီးပါး အား စာရင်းအင်း အချက်လက်များဖြင့် မကြာခင် တင်ပြပါမည်။
REVEALED! Security Photos Reveal Middle Eastern Men With Backpacks At Boston Marathon BREAKING NEWS: These photos clearly reveal the covert team that planned and set off the bombs that maimed and killed people at the Boston Marathon on Monday. These are the actual security camera photos from the day of the race. In these photos, you can clearly see men of Middle Eastern descent with backpacks that disappear. Draw your own conclusions.
In this photo we see what appears to beaMiddle Eastern man withabackpack one moment, and no backpack shortly after. What happened to his backpack? Close-up of same man after he shed his backpack. Unidentified man crouching inadoorway and obviously trying not to be spotted. He also hasabackpack. Same Middle Eastern man withacaucasian partner, they are obviously military or members ofamilitant organization.
ဘော့စတွန်ဗုံးမှာသုံးတဲ့Pressure cooker အဖုံးလမ်းတဖက်ကအမိုးတခုပေါ်လာတင်...
ဘော့စတွန်မြို့ မာရသွန်ပြေးပွဲကို ပစ်မှတ်ထား ဗုံးဖေါက်ခွဲ ခဲ့တဲ့သူလို့ သံသယ ရှိသူ တဦးကို ဖမ်းဆီး ဘော့စတွန် မာရသွန်ပွဲ ဗုံးခွဲသူလို့ သံသယရှိသူကို ဖမ်းလိုက်ပြီ
တနင်္လာနေ့က ဘော့စတွန်မြို့ မာရသွန်ပြေးပွဲကို ပစ်မှတ်ထား ဗုံးဖေါက်ခွဲ ခဲ့တဲ့သူလို့ သံသယ ရှိသူ တဦးကို စုံစမ်းစစ်ဆေး သူတွေက ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
လုံခြုံရေး ဗီဒီယို ကင်မရာမှ တွေ့ရှိချက် အရ လူတဦးဟာ ပန်းဝင်တဲ့စည်း အနီး လမ်းမပေါ်မှာ အိတ်တလုံးကို ချပြီး ထွက် ဒုတိယ ဗုံးပေါက်ကွဲတဲ့ နေရာရဲ့ လမ်းတဘက်မှာ ရှိတဲ့ ကုန်တိုက် ကနေ ရိုက်ကူးထားတဲ့ လုံခြုံရေး ကင်မရာ မှာ အဲဒီ သံသယ ရှိသူကို တွေ့ရတာပါ။
ဗုံး ပေါက်ကွဲမှု ၂ ခုကြောင့် အသက် ၈ နှစ်အရွယ် ယောက်ျားလေး တဦး၊ အသက် ၂၉ နှစ် အမျိုးသမီး တဦးနဲ့ တရုတ် နိုင်ငံက ဘွဲ့လွန် ကျောင်းသူ တဦး သေဆုံးသွားခဲ့ ပါတယ်။
လာမယ့် နာရီပိုင်း အတွင်း အရာရှိတွေက သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တရပ် ပြုလုပ်ဖို့ ရှိပါတယ်။
သတင်းတပုဒ်မှာတော့ဘော့စတွန်ရဲက ဖမ်းဆီးမိတာမဟုတ်ဖူးလို့ငြင်းဆိုထားပါတယ်။ စီအင်အင်မှာလဲ၊ဗုံးဘယ်လိုကွဲတာတွေလာနေပါတယ်။သမ္မတကလည်းလက်နက်ထိန်းချူပ်ရေးနဲ့ပါတ်သက်ပြီးမဲပေး ခဲ့တဲ့အပေါ်---ရှက်စရာဝါရှင်တန်--- ဆိုပြီးဒီနေ့မိန့်ခွန်းမှာထဲ့ပြောသွားပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကိုအခွင့်ကောင်းယူ
Black Angle's photo.
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမှ OIC အား မြန်မာအစိုးရ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကြိုးပမ်းနေခြင်းအား အခွင့်ကောင်းယူ၍ ဘင်္ဂလီရိုဟင်ဂျာများနေရာချထားရေးအတွက် အသုံးချရန်တိုက်တွန်း
Use reforms to settle Rohingya issue: FM
Foreign minister Dipu Moni has called upon the OIC member states to take the ‘opportunity’ of Myanmar’s current reforms to settle the Rohingya issue.
“We must recognise and use the strength of our moral weight to make sure that the most vulnerable people in Myanmar, especially the Rohingyas, do not remain excluded from the dividends of reform,” she said inaministerial meeting on Sunday at the OIC headquarters in Jeddah.
The foreign ministry released her speech on Monday.
Moni expressed her concern over ‘no progress’ with the proposed visit ofaministerial delegation of the OIC Contact Group to Myanmar.
“It is also unfortunate that the OIC’s offer of humanitarian assistance to those in need has also met with resistance,” she said.
Despite the challenges, she said, OIC must send outaclear message to it Muslim brethren that “we shall continue to stand by them and never give up till we findalasting solution to their problems.”
“We must continue to act asaconduit to channel their legitimate concerns to the larger international audience.”
She also suggested OIC member states’ to give ‘uniform and unequivocal’ message to the Myanmar leadership across the political spectrum and offeredafew ideas to resolve the crisis that include dialogue between Muslims and Buddhists in the Rakhine state.
She suggested first to convince the Myanmar authorities, and particularly the Rohingya and Rakhine communities, that the OIC’s offer of humanitarian assistance is meant for all distressed and displaced people in the Rakhine State.
“There appears to beamotivated trust deficit about the OIC’s objectives, which we should takeapro-active approach to address,” she said.
The minister also stressed the need for ‘neutralising the radical elements’ within both communities and for promoting dialogues among the moderates within their respective leaderships.
She said the OIC could possibly play the role ofafacilitator for holding inter-communal and inter-faith dialogues to reinforce mutual respect and understanding.
It should also continue to urge the Myanmar government to create better economic opportunities for the Muslim minorities in Myanmar.
Raising the issue of Rohingyas’ irregular movements at seas from the coasts of Myanmar and Bangladesh, mostly towards Malaysia and Thailand, she suggested ‘better policy coordination’ to make sure that the migration schemes being undertaken by some OIC member states do not work asa‘pull factor’ for such irregular movements.
She saidalarge number of Rohingyas, including women and children, are reportedly falling prey to the trafficking and people’s smuggling networks operating in the region.
“We need to enhance further cooperation among the concerned regional countries to prevent such irregular movements and provide necessary support to the victims.”
The intrusion of Rohingyas in Bangladesh started in 1978. Bangladesh officially accommodates about 30,000 Rohingya refugees, though different estimates put the unofficial figure between 0.3 and 0.5 million.
Myanmar has been denying them citizenship for long despite the fact that Bangladesh witnesses fresh influx when any violence occurs in the Rakhaine state.
The Foreign Minister said the Rohingya nationality question also has some ‘added urgency’ in view of the national population census in Myanmar slated for next year.
“The current official attempt in Myanmar to term the Rohingyas as “Bengali or Bangladeshi immigrants” inageneral sweep does not have any historical or legal basis,” she once again said.
She said their ‘safe and sustainable return’ from Bangladesh to Myanmar remains ‘an outstanding concern for us.’
Dipu Moni referred to the process of verification ofasmall number of registered refugees in Bangladesh two years back for their ‘possible voluntary repatriation’ to Myanmar and wished to resume the process ‘as early as possible’ through bilateral consultations.
The process stalled in the wake of the sectarian violence in the Rakhine State in June last year.
She hoped that the Investigation Committee set up by the Myanmar President last year would ‘soon submit its report and make recommendations on the entire gamut of issues concerning the Rohingya situation in the Rakhine State.’
She said the situation in Myanmar is ‘evolving fast’ and the situation of the Muslim minorities there is ‘getting ever more complicated.’
Within the OIC, she said, “We must rise to the occasion and get things done to end the systematic persecution and discrimination against the Rohingyas and other Muslim minorities in Myanmar.”
မူရင်း - http://bdnews24.com/bangladesh/2013/04/15/use-reforms-to-settle-rohingya-issue-fm
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/17/2013 1 အကြံပြုခြင်း
အိုဘာမားထံ လိပ်မူပေးပို့သည့်စာတွင် အဆိပ်ဆီတစ်မျိုး တွေ့ရှိရ
အမေရိကန်သမ္မတ ဘာရတ် အိုဘားမားထံသို့ လိပ်မူပေးပို့သော စာတစ်စောင်တွင် မင်္သကာဖွယ်ရာ တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း အမေရိကန် Secret Service က ပြောကြား အမေရိကန်သမ္မတ ဘာရတ် အိုဘားမားထံသို့ လိပ်မူပေးပို့သော စာတစ်စောင်တွင် မင်္သကာဖွယ်ရာ တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း အမေရိကန် Secret Service က ပြောကြားသည်။ အဆိုပါစာတွင် ricin ဟုခေါ်ဝေါ်သည့် အဆိပ်ဆီတစ်မျိုး ပေကျံနေကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ထိုအတောအတွင်း အမေရိကန်လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ Hart Senate Office တွင်လည်း မင်္သကာဖွယ်ရာ စာအိတ်တွေ့ရှိရမှုအပေါ် ရဲတပ်ဖွဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်နေကြောင်း AFP တွင် ဖော်ပြသည်။
(ဧပြီ ၁၆ ရက်က မေရီလန်းပြည်နယ် ဟိုက်စ်ဗေလီမြို့ရှိ စာပို့လုပ်ငန်း အဆောက်အအုံတွင်တွေ့ရသည့် အဆိပ်သင့်ပစ္စည်း ရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့မော်တော်ယာဉ်)
လွှတ်တော်အဆောက်အအုံတွင် မင်္သကာဖွယ်ရာ စာအိတ်သယ်ဆောင် လာသူတစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ကြောင်းနှင့် လွှတ်တော် အဆောက်အအုံများတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့က ရှာဖွေရှင်းလင်းမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် အမတ်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဂျိုးမန်ချင်က Hart Senate Office အဆောက်အအုံရှိ ၎င်း၏ရုံးခန်းအား အသွားအလာတားမြစ်ကာ ရှာဖွေရှင်းလင်းမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း အတည်ပြုပြောကြားသည်။
ဘော်စတွန် မာရသွန် ဗုံးပေါက်ကွဲ မှု တွင် သေဆုံးခဲ့ရ သည့် တတိယမြောက် တရုတ် ကျောင်းသူ လေး
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဘော်စတွန် မာရသွန် ဗုံးပေါက်ကွဲ မှု တွင် သေဆုံးခဲ့ရ သည့် တတိယမြောက် တရုတ် ကျောင်းသူ လေး Lu Lingzi ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ Boston University မှကျောင်းပြီးထားသူဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ပြည် အရှေ့မြောက် အရပ် Shenyang သူဖြစ်ပါတယ်။
A clearer portrait emerged early Wednesday morning of the victims of the horrific bombings at the Boston Marathon. The third person killed is being identified asaChinese graduate student at Boston University originally from China’s northeastern city of Shenyang,astate-run Chinese newspaper reported.
လုံခြုံရေး ဗီဒီယို ကင်မရာမှ တွေ့ရှိချက် အရ လူတဦးဟာ ပန်းဝင်တဲ့စည်း အနီး လမ်းမပေါ်မှာ အိတ်တလုံးကို ချပြီး ထွက်သွားတယ် ဆိုတဲ့ နောက်ဆုံး သတင်း ရလဒ် ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယ ဗုံးပေါက်ကွဲတဲ့ နေရာရဲ့ လမ်းတဘက်မှာ ရှိတဲ့ ကုန်တိုက် ကနေ ရိုက်ကူးထားတဲ့ လုံခြုံရေး ကင်မရာ မှာ အဲဒီ သံသယ ရှိသူကို တွေ့ရတာပါ။
Eleven Media Group's photo.
တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းမှ အွန်လိုင်း မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ် အတွင်း သြဇာအရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွေးချယ် ခံရကြောင်း သိရပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အွန်လိုင်း မဲပေးရွေးချယ်မှု နောက်ဆုံး အဆင့်တွင် ပေါ့ပ်အဆိုတော် လေဒီဂါဂါနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးအဆင့် မဲပေးရွေးချယ်မှုကို မြန်မာစံတော်ချိန် ဧပြီလ ၁၇ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ရပ်နားခဲ့ပြီး ရရှိသော ဆန္ဒမဲ ရလဒ်များ အရ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် အနိုင်ရရှိကြောင်း တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းမှ ထုတ်ပြန် ကြေညာ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆန္ဒမဲ အရေ အတွက် စုစုပေါင်း၏ ၆၁ ရာခိုင်နှုန်း ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရရှိခဲ့ပြီး ၃၉ ရာခိုင်နှုန်းကို လေဒီဂါဂါက ရှိခဲ့ပါသည်။
ဘော့စတွန်ဗုံးမှာသုံးတဲ့Pressure cooker အဖုံးလမ်းတဖ...
အိုဘာမားထံ လိပ်မူပေးပို့သည့်စာတွင် အဆိပ်ဆီတစ်မျိုး...
ဘော်စတွန် မာရသွန် ဗုံးပေါက်ကွဲ မှု တွင် သေဆုံးခဲ့ရ ...